Shina : Mpitati-Baovao Nametra-pialàna Fa Nanao Vazivazy Ratsy Momba Ilay Vehivavy Mpanamory Sambondanitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jolay 2012 8:03 GMT
Nisolotena tamin'ny fandefasana ny Fiarandanitra Shenzhou 9, iraka an-habakabaka ho fanehoana ny voninahi-pirenen'i Shina i Liu Yang vehivavy mpanamory sambondanitra. Talohan'izay anefa, nisy fanapahan-kevitry ny iray avy amin'ny mpanao gazetin'ny “Southern People Weekly” Cao Linhua hikosoka ny hatsikana maloto nataon-dry zareo tamin'ny sehatra media sosialy be mpisera indrindra ao Shina, Weibo Sina, momba an'i Liu sy ireo mpanamory sambondanitra miara-miasa aminy izay niafara tamin'ny fametraha-pialàny.
Tamin'ny datin'ny 12 jona ( fa voafafa, saingy navoakan'ny gazety mpiseho isan'andro ao Malazia Sin Chew Daily indray) ny fanehoan-kevitr'i Cao voalohany.
Lehilahy 2 ary vehivavy 1 mankany an-danitra, kanefa ahoana raha toa bevohoka ity farany tafaverina avy any? sa anisan'ny fanazarana ireo mpanamory sambondanitra izany?
Liu Yang, vehivavy mpanamory sambon-danitra voalohany any Shina. Saripika avy amin'ny Off Beat China.
Nahatezitra ireo mpiserasera aterineto indrindra ilay vazivazin'i Cao, nefa tamin'io fotoana io koa no nanasongadinan'ireo mpisera aterineto hafa ny fahatsapany amin'ny fampitahana an'ireto vehivavy roa, Liu Yang sy Feng Jianmei any Shina.
Ny voalohany dia natao ho masoivohon'ny Fanjakana ary nahazo ny lanitra, raha tafalatsaka tany amin'ny helo amin'io fotoana io ihany noho ny herin'ny fahefana hanala zaza ny farany.
Liz Carter avy ao amin'ny Tea Leaf Nation nanazava ny fihetseham-pony tamin'ny alalan'ny dikantenin'i “Sudd's” (@假裝在紐約‘s) Sina Weibo:
Afaka mandefa vehivavy taikonaut mahefa tsara eny an-habakabaka isika, ary afaka manala zaza ambohoka fito volana hiala an-tanindrazana koa. Asehon'ny anjara sy vintan'ireto vehivavy roa, 33 ans, Liu Yang ary 22 taona [sic] Feng Jianmei, ny fanasongadinana mazava indrindra ny “faharovitan” (fahasimban)'ity firenena ity. Raha toa ka mampamirapiratra ny henatra sy ny fahadisoam-panantenana ny voninahitra sy ny nofinofy, miara-dalana ny teknolojia avo lenta sy ny fanosihosena ny vahoaka. Manidina eny an-habakabaka ny balafomanga raha mirefarefa amin'ny tany ny maoralin'ny vahoaka, mitsangana ny firenena ary ny olona mandohalika ao anatin'ny fankatoavana. Izany no fihaonan'ny fotoana tsara indrindra sy ny fotoana ratsy indrindra.
Voafindran'ny bilaogera malaza Han Han tamin'ireo mpankasitraka azy an-tapitrisany indray avy eo ny bilaogy bitik'i Sudd, nahazo fanamarihana betsaka nanerana ny sehatra media sosialy izany [Voafafa ihany koa ny filazan'ny Han Han]
Na izany aza, nifanohitra indrindra tamin'ny nahazo vintan'ilay vahinin'ny CCTV Yang Rui, izay nanamarika fandatsana avokoa mikasika ilay “fanadiovana ireo fako vahiny” izay narovan'ireo mpanentana ao amin'ny haino aman-jerim-panjakana izany, Vaovaon'ny Vahoaka [zh] nanatsonga fanadihadiana tao amin'ny fitsapa-kevitra Weibo [zh] natsangan'ilay mpisera Maenliesimao (＠大史公說),ary ny valiny nivoaka dia ny 91% amin'ireo mpisera aterineto nahatsapa fa tokony hametra-pialana amin'ny gazety i Cao [ambanin'ny 87% rehefa tapitra ny fitsapa-kevitra].
Nanao fialan-tsiny ampahibemaso i Cao ny tamin'ny 19 Jona. Saingy nisy fanisana misaraka[zh] nataon'ny Zhang Hai (@烟大張海) izay nampiseho fa ny 64,8% tamin'ireo namaly no manohitra ilay fangatahana ny fametram-pialan'ny M.Cao, toy ny manampy olona iray izay naniratsira, tsy ireo mpanamory sambondanitra ihany fa ny iray tamin'ireo tetikasa hanomezam-boninahitra ny firenena koa ny hevi-bahoaka.
Amin'izany, indreto misy adi-hevitra vitsivitsy tao amin'ny Weibo tamin'ilay fametraham-pialan'i M.Cao [zh]:
@九成博友:Nanao fahadisoana i Cao, ny famaizana amin'izany dia miankina amin'ny ambaindainy sy ny fahefany. Amin'ny maha-mpanao gazety amin'ny sampan'orinasa gazety malaza azy, manana ny lazany kokoa ny soratany amin'ny bilaogy bitika noho izay soratan'olontsotra hafa.
@金台-夕照Voasazy noho ny fahadisoany ihany ny olona fa tsy noho ny satany. Tsy misy vidiny ny tenin'i Cao, ary ambony noho lavitra noho ny kivalavala nataony ny fanavakavahana ny vehivavy tamin'ny teniny; tokony hosaziana izy, na mpanao gazety izy na tsia, na nisy namaky na tsia ny zavatra nosoratany
@麦道与波音Antitrateriko fa resaka fahafahana maneho hevitra io. Ilaina ny fialan-tsiny, fa tafahoatra kosa ny hoe fametraha-pialana. Mino aho, fa amin'ny fiarovana ny zon'ny hafa, any ambadik'izany miaro ny zontsika ihany isika.
@柯华上海Sangisangy ve izay? faniratsirana ny vehivavy izany!
@木易金昆Nilaza ve izy hoe olom-pirenena rehefa mibilaogy? Manan-jo minia haniratsira ny hafa ve ny olom-pirenena iray? dombo izy ary tsy mahafantatra na inona na inona mikasika ny lalàna. Tokony hizaka ny andraikiny ara-dalàna izy ary melohina ho nanao faniratsirana.
@莲花台888 Olombelona ianao ka tsy jerena raha mamahana bilaogy ianao na na tsia. Tokony hihevitra ny tenanao ho olombelona ianao fa tsy manambany ny tenanao.
@美国移民律师事务所老叶Fa nahoana ity mpanao gazety mbola tanora no nahazo ny mahamay toy izany? ny Amerikana no miresaka malalaka ny fananahana eny an'habakabaka, izaho ary vao omaly nahita fitantarana vaovao mikasika izany tao amin'ny Sina.com